Iwe Unotumira Meseji kubva muBathroom? | Martech Zone
China, Gumiguru 20, 2011 Svondo, October 4, 2015 Adam Mudiki
Mikana yakanaka kwazvo kuti iwe unonyora mameseji kubva kuimba yekugezera ... pachokwadi vanhu vaviri pavanhu vatatu vanobvuma kuzviita. Izvo zvinondishungurudza kunze kufunga nezvekukwereta chero nhare mbozha izvozvi! Tinozvifarira kana vatengi vedu vakashandisa edu mameseji masevhisi… asi tinotenda kunaka ivo kazhinji vari kunze kwe imba yekutengesa! Kana iri 2 / 3rds yenyu… Ndinovimba imi mese mune zvinobata zvidzitiro uye chimwe chetatu chine makhibhodi.
Kana vari vako vatumira mameseji munzvimbo yemamuvhi… ehe, tinokuona. Ndiri kuda kuziva kuti nei masheatre asina kuisa nhare mbozha. Ini ndaizobhadhara imwe yekuwedzera bhaisikopo kana ndaisafanirwa kunzwa munhu Justin Bieber ringtone! Kutenda kune vanhu vepaTatango nekuseka ... Ndiri kuzogeza maoko angu izvozvi.
Ramangwana Rinosanganisira Microsoft
Gumiguru 20, 2011 na5: 29 PM
Gumiguru 20, 2011 na5: 57 PM
Tinotenda nekutumira yedu infographic!
Gumiguru 24, 2011 na2: 33 PM
zvakanaka, ndiri mu1/3 isingaite ndichiita nhamba 2. isu takanyanya kudaro haha